အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလိုခံယူမယ်ဆိုရင်ဖြင့် – Live the Dream
အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလိုခံယူမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
အလုပ်ကို ဘယ်လိုခံယူထားလဲ? မေးလာရင် အဖြေရှိပြီးလား? တစ်ချို့တွေက ငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ တစ်ချို့က တိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်တယ်။ တစ်ချို့က အတွေ့အကြုံအတွက် အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးတွေရှိသလို လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ အလုပ်အပေါ် ခံယူချက်တွေကလည်း ကွဲပြားနေကြပါတယ်။
အလုပ်အပေါ်ထားရှိတဲ့ ခံယူချက်အပေါ်မူတည်ပြီး လူတွေရဲ့ အလုပ်ခွင်ထဲက စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်က ကောင်းမကောင်းဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အလုပ်မှာ မကောင်းတဲ့ ခံယူချက်လေးရှိနေရင် မကောင်းတဲ့ ရလာဒ်ပဲ ထွက်လာပြီး ခံယူချက်ကောင်းကောင်းထားရင်တော့ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ အဆင်ပြေနေတာမျိုးကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးသလို ကိုယ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ အဖွဲ့အစည်း တွေကို လည်း တိုက်ရိုက်ထိရောက်စေပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အလုပ်မှာ ဘယ်လိုခံယူချက်ထားရှိသင့်လဲ? ဆိုတာကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်ခွင်တစ်ခု မှာ တာဝန်ယူစိတ်၊ တာဝန်ခံစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကြောင့် လုပ်ငန်းတစ်ခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ Department တစ်ခုက တိုးတက်ဖို့နှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရထားတဲ့ တာဝန်ကိုမှ ကျေပွန်အောင် မထမ်းဆောင်နိုင် ရင် တစ်ခြားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ငြိုငြင်မှုနဲ့ Team တစ်ခုမှာ မကောင်းတဲ့သူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့မှာ ဒီလိုလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်၊ ဒါကို ကျေပွန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်လေးတွေထားရင်တော့ အလုပ်ခွင်ထဲမှာအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရာ ဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်အသတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တာဝန်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပြီး တစ်ခြားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်လည်း ကူဖော်လောင်ဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ.. ကိုယ်ဟာ အလုပ်ခွင်မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
တစ်ချို့သောသူတွေမှာ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ အလုပ်လုပ်ရသော်လည်း ငါ့အတွေးပဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့ တစ်ဖက်ပိတ်အမြင်တွေ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပဲ တစ်ကိုယ်တော် Hero လုပ်ချင်တဲ့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ စိတ်ထားတွေက အတော်လေးဆိုးဝါးလှပါတယ်။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်တဲ့ နွံကျွံတဲ့လှည်းဘီးအကြောင်းကိုသင်ခဲ့ဖူးမယ်ဆိုရင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ် က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးလည်း ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မုဒိတာမပွားတတ်သေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလေးသာသာပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ် ထားတတ်ဖို့သင်ကြားရပါဦးမယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အတူတူအောင်ပွဲခံတဲ့အရသာကို ကြိုက်တတ်ဖို့သင်ယူရပါဦးမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မညီညာခဲ့လို့ မသွားဖြစ်တဲ့ခရီးတွေ၊ မကြည့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေက အစ မအောင်မြင် မဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ project တွေ၊ နင်အဖြူငါအမဲနဲ့ အဖွဲ့အစည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရခြင်းတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ များစွာတွေ့ နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ သင်ရော ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ?
အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေ ကိုယ်စီ ခိုင်မာကြပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေအဆင်မပြေကြုံလာတဲ့အခါ မောပန်းနွမ်းနယ်ရတာမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်သလောက်ရမလာတဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်တွေ ဟိုးအောက်ဆုံးအထိကျဆင်းပြီး ဆက်မကြိုးစားချင်တော့တာ၊ လက်လျှော့အရှုံးပေးချင်လာတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူစိမ်းလူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာကိုမပြောနဲ့ အရင်းနှီးဆုံးလူတွေနဲ့တောင် ကတောက်ကဆ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် အဆင်မပြေမှုတွေအတွက်တော့ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး အလုပ်ကြိုးစားစရာရှိတာကိုပဲအာရုံစိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်က ကိုယ့်အတွက် Comfort zone မဟုတ်တဲ့အခါ ခက်ခဲမှုတွေကြုံလာရစမြဲပဲလေ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ နှိုင်းစာရင် မပြောပလောက်တဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကို မလဲပစ်ပါနဲ့။ စိတ်ရှည်သည်းခံ အောင်ပွဲခံဆိုသလို အောင်မြင်မှုက ကိုယ့်ဘက်မှာမဟုတ်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ စိတ်ရှည်လိုက်ကြတာပေါ့..
၄. ငါသည် CEO
အလုပ်ခွင်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရပ်တည်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်သလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို မြင့်တင်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (အဲ့လိုအချက်တွေနဲ့မကိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့) အလုပ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေပေးစွမ်းနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကရော အလုပ်အပေါ်မှာ စေတနာ ပြန်လည်ထားရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ တစ်ချက်ပါပဲ။ အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မပါတော့ဘူး၊ ပျင်းလာပြီ၊ ဒီတစ်ခေါက်တော့ဂျင်းထည့်လိုက်မယ်။ ကောင်းကောင်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒီပြဿနာကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအပေါ် ထိုးကျွေးလိုက်မယ်၊ ပုံချလိုက်မယ် စသည်ဖြင့် အလုပ်အပေါ် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ စေတနာရှိရှိ မလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ဆိုရင်တော့ ပြုတ်စော်နံရုံတင်မက ပုတ်စော်နံတဲ့ မကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းအတွက်တော့ ကိုယ်က CEO ပါပဲ။ တာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိရမယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်သလို ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ စေတနာပါပါလုပ်ရမယ်။ ရိုးသားမှုရှိရမယ်။ ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားစေတနာတွေက ကိုယ့်အပေါ်တိုက်ရိုက်တန်ပြန်သက်ရောက်လာမှာဖြစ်လို့ ရည်ရှည်သက်မွေးဝမ်းကြောင်းခရီးမှာ ကိုယ့်အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ သူများဝန်ထမ်းပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်ကိုယ်ကို CEO ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့.
နိစ္စဓူဝ ပုံမှန်အလုပ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့တွေ၊ လတွေ၊ နှစ်တွေ ဖြတ်သန်းရင် မတိုးတက်ပဲ အရည်အချင်းတွေရပ်တန့်နေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားရမယ့်အခြေအနေပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ သင်ယူစရာ လေ့လာစရာတွေနဲ့ တိုးတက်ဖို့၊ ရင့်ကျက်ဖို့ ကို အခွင့်အရေး တန်းတူရထားတာကြောင့် တိုးတက်မယ့်လမ်းကြောင်းကို မရှာသရွေ့ ကိုယ့်ရှေ့ရောက်နေတဲ့သူတွေကို အားကျရုံမှတစ်ပါး ဒီနေရာမှာ ရပ်မြဲရပ်နေရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်ဖို့၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်မြင့်တင်ဖို့ ကို တစ်ခြားသော မလိုတဲ့အရာတွေထက် အာရုံစိုက်ပါ။ Junior Level ကနေ Senior Level, Senior Level ကနေ Manager စသည်ဖြင့် တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ထိုင်ခုံပြောင်းဖို့ကြိုးစားရင်း ဝန်ထမ်းဘဝကနေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်တဲ့အထိ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပြီး နေ့တိုင်းမှာတိုးတက်စေဖို့ လေ့လာမှုတွေ၊ သင်ယူစရာတွေကို ရှင်သန်စေပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ထားသင့်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို လုံလောက်စွာမသိရင်တောင် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေနော်…